Kani Waa Naadigii koowaad ee u soo dalacay Premier League Xiliga danbe? | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Kani Waa Naadigii koowaad ee u soo dalacay Premier League Xiliga danbe?
(15-4-2018) Mid ka mid ah kooxaha ka cayaarayey heerka labaad ee dalka England ayaa xaqiijiyey in ay u soo dalceen Horyaalka Premier League dalka England kadib markii bareejo lagu celiyey Naadigii ku soo xigey.
Kooxda Wolverhampton Wanderers ayaa xaqiijisey in ay dheeli doonto Horyaalka Premier League Xiliga soo socda kadib markii ay ku Guuleysatay Horyaalka Championship waxayna ka faa iideysatay markii ay bareejo Gashay Fulham oo lacayaartay Sabtigii Brentford.
Wolverhampton Wanderers oo Axada labalansan kooxda Birmingham City ayaa inta aysan dheelin Xaqiijisey in ay u soo gudubtey Horyaalka Premier League iyada oo leh 92 dhibcood Waxaana ku soo xiga Cardiff City oo 83 dhibcood leh iyo Fulham oo 82 leh.